Ra’iisul wasaare Rooble oo si rasmi ah xilkiisa ula wareegay (Sawirro) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ra’iisul wasaare Rooble oo si rasmi ah xilkiisa ula wareegay (Sawirro)
written by Admin 27/09/2020
Munaasabad uu xilka kula wareegay Ra’isul wasaaraha cusub ee xukummadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka dhacday aqalka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana uu kala wareegay sii hayihii xilka ra’isul wasaaraha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Qadar).
Munaasabada waxaa goob joog ka ahaa guddoomiye ku Xigeenka 1-aad ee Golaha shacabka barlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiwali Ibaraahim Sheekh Muudey iyo xubno ka tirsan guddiga qaban qaabada diyaarinta xaflada xil wareejinta.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 17 bishaan u magacaabay xilka ra’isul wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble kaddib markii 25 bishii agoosto ay golaha shacab ay kalsoonida kala laabteen xukumadda hore ee uu hogaaminayay ra’isulwasaarihii hore ee dalka xasan Cali Kheyre.
Ra’iisul wasaare Rooble oo si rasmi ah xilkiisa ula wareegay (Sawirro) was last modified: September 27th, 2020 by Admin
Dalalka G-20 ku bohoobey oo ku yaboohay $21 bilyan oo lagu tacaalo Covid-19
Xaafada Holwadaag iyo Deegaanka Deynuunay oo Caawa habeenkii 8 aad tartan xiiso leh dhexmarey.
Dhageyso:-Kulunka Golaha waziirada dowlada goboleedka Kgs ayaa looga hadley ammanka iyo abaaraha
Xasan Cali Kheyre “Waxaan go’aasanaday inaan xilka iska casilo oo aan qeyb uga noqon qalqalsiyaasadeed”
Akhriso:-Wasaaradaha kalluumeysiga dowlad goboleedyada oo uu shir uga furmay Kismaayo